Super Sharp, kucheka uye kugadzirisa muapp yevhiki | IPhone nhau
Super Sharp, kucheka uye kugadzirisa mune iyo app yevhiki
Masekondi 604.800 apfuura zvekare, zvinoreva kuti tatova neapp nyowani yemahara kwemazuva manomwe. Pane ino chiitiko, iko kushandiswa kwevhiki mutambo (Kushamisika! ... kana kwete) inonzi Yakapinza yatichazofanira cheka zvinhu zvakasiyana kugadzira dzimwe nguva chikamu chezvinhu zvatinocheka uye dzimwe nguva mabhora (pakati pezvimwe zvinhu) anobata mavara ane mavara anoonekwa kumwe kunhu pachiratidziri.
Yakadaro saizvozvi, chokwadi ndechekuti zvinoita sezviri nyore, asi izwi rekuti "unopinza" rinorevawo "rakapinza" uye riri mumusoro wemutambo kune chimwe chinhu. Semamwe mimwe mitambo yakawanda, mushure mematanho ekutanga anoshanda sedzidziso, zvinhu zvinotanga kuomarara uye zvinoita kuti tifunge kuti gehena tinowana sei chimwe chinhu chekubata zvikwere. Asi iwe waitarisira chii kubva pa mutambo wakagadzirwa kuti tifunge?
Super Sharp inotaridzika yakapusa, asi haisi
Zvirinani sekuedza kwandamboedza, uye ndinofungidzira kuti zvichave sezvizvi mumutambo wese, tinogona kucheka zvinhu kusvika pasisina chinhu chasara kucheka kana kubata pakona yekumusoro yekurudyi kwescreen. Izvo zvazviri, tinogona kuzadzisa chinangwa chedu nenzira churu, uye ndicho chinhu chandinofarira nezve Super Sharp, izvo hatina imwe chete nzira chaiyo yekuita zvinhu.
Izvo zvinopera pasina kutaura kuti Super Sharp haisi kuzohwina mubairo weakanakisa mifananidzo yegore, asi kana zvakare haina kana chinangwa. Uyu mutambo unoratidza zvakare zvakare kuti hazvigare zvichidikanwa kuti uve nemifananidzo yakakura kuti ufare. Ruzha harusi kuzokunda chero mibairo, asi ndinofunga chakakosha chinhu chose Super Sharp yangu yatondishamisa. Muchokwadi, ndakarodhaunirodha kuti ndiedze, uye ndanga ndichiitamba kwenguva yakareba kupfuura zvandaitarisira.
Semazuva ese, zvakakodzera kutora mukana weApp yeVhiki dhiri uye kurodha pasi Super Sharp ichiripo. inowanikwa mahara. Chokwadi zvinoitika kwauri seni, kuti haurege kutamba nekukurumidza. Kumirira Pokemon GO ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Super Sharp, kucheka uye kugadzirisa mune iyo app yevhiki
Spotify inotangisa nhepfenyuro mbiri nyowani